Tantara natao ho an'ny ankizy
ILAY MPAMBOLY ANANA KRISTIANA
Nisy mpamboly anana kristiana iray nanana tanimboly mifanolotra amin'ny mpiompy akoho iray.
Isan'andro dia potehin'ny akoho foana ny anana na dia efa voafefy tsara aza. Tenenina foana ny tompon'akoho fa tsy ahoany ihany. Efa tena leo ilay mpamboly ka dia nivavaka tamin'ny Tompo izy ny amin'izay tokony hataony. Hopoizininy ve ny akoho sa hotorahany ho faty?
Nony ampitso indreny indray ny akoho fa tonga. Dia navelany hanara-po teo ireo biby. Tapitra ny soritr'anana iray, fongana tanteraka. Lasa ny akoho rehefa voky. Nahita izany ilay mpiompy dia efa nivonombonona ny hiady:"raha vao miteny eo io, ataoko mahalala ny anarako".
Tonga ny ampitso, napariakany soa aman-tsara ny akoho ary tonga hatreny an-tanin'anana, saingy tsy nahita nohanina intsony fa nihehy ny tanimboly indray no nataony. Dia nivoaka avy any an-trnony ilay mpamboly kristiana nivimbina vary akotry tamin'ny haronkely ary natsipiny ho an'ireo akoho tery amin'ny lavidavitriny tanimboliny.
Torak'izany ihany ny ampitso sy ny afak'ampitso.
Ilay tompon'akoho amin'izany miandry ihany sao misy maty na marary ny akohony. Saingy tsy nisy izany.
Rehefa afaka hateloana, indro ilay tompon'akoho nanatona ilay mpamboly anana: "Ity ny volanao, hoy izy, ho solon'ny vidin'anana simban'ny akohoko, ary ny akohoko dia efa nanamboarako fitoerany tsy ahafahany mandrongatra intsony ary dia miala tsiny indrindra tamin'ny zava-niseho."
"Tsy misy tsiny", hoy ilay mpamboly nitsiky, "aleo ho an'ny akoho ny tsiny fa isika olombelona tsy maintsy mihavana".
Ny hery tokoa tsy mahaleo ny fanahy.
"Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza... Aza mety ho resin'ny ratsy ianao fa reseo amin'ny amin'ny soa ny ratsy". Rom 12:17,21
Tsindrio eto raha hamaky tantara hafa